Nolosha Lamaanaha Wanaagsan - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA Nolosha Lamaanaha Wanaagsan
Nolosha Lamaanaha Wanaagsan
Xogside – Markii uu quraacday ee uu dharka xidhay ayuu shaqada u baxayay, waxa uu galay Qolkiisa akhriska waxa uu ahaa mid aad u boodh badan oo shaashada TV-ga ay qarsomtay, waxaana uu kaga tegay muftaaxyadii xafiiskiisa. Gabadhiisa ayuu ka codsaday inay qolka uga soo saarto muftaaxyada oo ugu keento xafiiskiisa.
Muftaaxii ayay u qaaday waxaana ay uraacisay fariinta ah: “ Way isoo gaadhay fariintaadu, waana aan ku dadaali doonaa nadaafadda, waxaan ku hayaa kalgacal badan”. Sidaasi ayuu ninkaa caaqilka ahi u saxaa xaaskiisa haddii uu khalad ku arko isagoon niyadeeda waxba yeelin. Dhaqanka wanaagsan abuur oo masax dhaqanka xun.
Previous articleXoojinta Difaaca Jidhka
Next articleGeesinimadu Waa Daacadnimada